China Laser yekurapa firimu Vagadziri, Vatengesi, Fekitori - Quotation - Shenzhen JAK Medical Technology Co, Ltd.
Imba > Chiremba firimu Chiremba firimu > Laser yekurapa firimu
Laser yekurapa firimu
Jun ankang radiology yekurapa firimu yakakodzera DR, CR, CT mufananidzo kuburitsa.Iine mukana weiyo yakakwira tsananguro, yekukurumidza kudhinda kumhanya, kuratidzira kuramba, isiri-chepfu, yakawanda-chinangwa, yakaderera mitengo zvigadzirwa.
Radiology yekurapa firimu:yakakodzera DR, CR, CT mufananidzo kuburitsa.
Iyo yekurapa firimu yeJun Ankang radiology department inokodzera DR, CR uye CT mufananidzo kuburitsa.Iine mukana weiyo yakakwira tsananguro, yekukurumidza kudhinda kumhanya, kuratidzira kuramba, isiri-chepfu, yakawanda-chinangwa, yakaderera mitengo zvigadzirwa.
Tsanangudzo:8 * 10 (203 * 254mm)
Junankang Medical Technology Yakaomesa Firimu
Zvisungo: imaging yekupisa, laser imaging, inkjet imaging (ese matatu matekinoroji)
Nzvimbo yekushandisa: yakajeka kamuri mashandiro (hapana kuburitswa, hapana kudhinda kunogona kushandiswazve)
Inoenderana mudziyo: Mufananidzo mudziyo unoenderana neese DICOM maprotocol.
Inoenderana nemhando: Konida, Fuji, Agfa uye zvimwe zvekushisa zvekufungidzira zvigadzirwa.
Zvimiro: diki grey mhute, yakakwira tsananguro, yakakwira density, yakajeka ruvara, iri nyore kushandisa
Hot Tags: Firimu rekurapaï¼ŒMedical printerï¼ŒRaser rekurapa firimu, China, vagadziri, vatengesi, fekitori, yakagadzirirwa, mutengo, chitaurwa.